मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सामाजिक कार्यक्रममा लागि सहयोग ~ Banking Khabar
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सामाजिक कार्यक्रममा लागि सहयोग
Bankingkhabar /September 12, 2021
बैंकिङ खबर । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संघ\_संस्था, व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यही भदौ महिनामा मात्र बैंकले ५ विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व मुलक कार्यहरुमा सहयोग गरेको छ ।
बैंकले प्रदेश १ र २ मा वित्तीय साक्षरताको अभियानमा सहयोग पुग्ने गरि ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेसन लिट्रेसी’ लागि रु ५०,००० रकम मिडिया इन्टरनेसनल प्रा. लि लाई सहयोग गरेको छ । यसै गरी कास्कीको मालपोत कार्यालयमा पाल्नुहुने सेवाग्राहीहरु बस्ने प्रतिक्षालयहरुमा आराम कुरुको अभाव भएको हुँदा बैंकले ३ थान ३ सिटरको फलामको कुर्सी मालपोत कार्यालय कास्कीलाई हस्तानतरण गरेको छ ।
यसका साथै, बैंकले बालबालिकाको शिक्षामा टेवा पुराउनका निमित्त रेश्ट फाउन्डेसन अन्तर्गत हेरचाह गरिएका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बालबालिकालागि चाहिने किताबको दराजको निमार्ण गर्न हेतु रु ४०,००० सहयोग गरेको छ ।
यसै गरी, बैंकले भैसेपाटी स्थित प्रगती युवा कल्बद्धारा आयोजन भएको रक्तदान कार्यक्रमका लागि पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ । उत्त कार्यक्रमले विद्यमान चरम रक्त अभावलाई केही हद सम्म भएपनि सहयोग हुने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । यस का साथै बैंकले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं २२ का २८ वर्षीय प्रकास बरालको मृगौला प्रत्यारोपनपणका लागि रु ५०,००० सहयोग गरेको छ ।
यस सहयोगहरुबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै, यस सहयोगबाट सेवा क्षेत्रका नागरिकको हितमा काम हुने विश्वास लिएको छ । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको ATM Card प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको VISA Network मा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको ATM Machine बाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा उत्पादनमुखी सहकारीलाई नियाल्दा :
नोटलाई जतन गरौं, पुजा नगरौं ! पैसाको सुरक्षाबारे कृष्णहरी बाँस्कोटाका टिप्सहरु
अनलाइनबाट बैंकिङ कारोबार गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने ?
सरकारी बैंकको तयारीकर्ताहरुलाई बैंकर सरोज कटुवालका टिप्सहरु :
बैंकिङ अन्तरबार्तामा जानुअघि के के कुरामा ध्यान दिने ?
माछापुच्छ्रे बैंकले २१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ल्यायो बम्पर अफर
बर्नार्ड अरनाल्ट : कसरी बने सन्सारका सबैभन्दा धनी ? (जीवनीसहित)
डिजिटल बैंकिङको अबधारणासँगै परिर्वतन भएका श्रृखलाहरु :
सेयर बजार एकैदिन १०८ अंकले घट्यो